Raadi waxa la sameeyo iyo waxa la sameeyo xiritaanka coronavirus soo socda: Martin Vrijland
Duqa magaalada Amsterdam Femke Halsema ayaa horeyba uga tagay shalay tilmaam in xidhitaanka guud ee Amsterdam ay u noqon doonto wax la yaab leh. On 18 Maarso De Telegraaf ayaa werisay in booliisku ay durba isku diyaarinayaan xidhitaan dhammaystiran. Warbixinta ee Telegraaf ee xalay in cudurka dureyga uu dib u soo laabto sidoo kale wuxuu u muuqdaa inuu yiri dhibka hadda waa labanlaab, maxaa yeelay coronavirus oo u muuqda inuu ku faafayo Brabant iyo sidoo kale hargabka faafa, Rutte ayaa lahaan doonta albiin si ay u doorto xiritaan dhammaystiran.
Waa maxay micnaha taasi micnaheedu yahay qaab macquul ah? Tani waxay ka dhigan tahay inaan laguu oggolayn inaad ka baxdid gurigaaga, isbaarooyinka ayaa meel kasta leh waana lagu qabanayaa haddii aad shaki ka qabtid ama tilmaam suurtagal ah oo laga yaabo inaad qabtid fayraska ama aadan raacin xeerarka (amarrada). Waxaan ku sifeeyay micnaheedu inay tahay si faahfaahsan halkan.
Fadlan faafi fariimaha sida tan iyada oo loo marayo Bloomberg, kuwaas oo caddeeya in 99% dadka fayraska ku leh Talyaaniga ay horey u qabaan cudurro kale isla markaana xirmada dawadan ee la maareynayo ay tilmaamayso inay u horseedi karto dhibaatooyin wadneed sababtoo ah kororka unugyada dhiigga cas, waxaad halis ugu jirtaa xabsi. Koonfur Afrika waxay horay u soo saareen sharcigaas waxaadna xabsi ku gali kartaa 6 bilood haddii aad faafiso farriin ka soo horjeedda khudbadda rasmiga ah. Xuquuqda oo dhan dabcan waa laga qaaday tan.
Haddii tani ay kugu dhacdo Nederland, waxaa suuragal ah inaad sidoo kale qaadatid dawo khasab ah. Sharci hore ayaa looga soo maray Nederland. Sharcigaas wuxuu dhaqan galay 1dii Janaayo 2020: Xeerka qasabka ee GGZ. Haddii aadan iskaashi la sameynin, waxaad u baahan tahay inaad gasho qolka go'doominta illaa aad liqdo kiniinka. Waa inaad sidoo kale aqbashaa sirinjarka jirkaaga ku jira, sababta oo ah sharciga ayaa lagu sheegay.
Ereyga 'xannibaadda wadarta' waa wax aan ka yarayn ama ka yar 'sharciga dagaal', oo sidoo kale loo yaqaan 'xaaladda degdegga ah'. Kadib waxaan na hareereynay ciidankeenna iyo ciidan badan oo boolis iyo xoojiyayaal ah. Sanadihii la soo dhaafay waxaa loo tababaray in aysan eegin aadanaha, laakiin ay si fudud u fuliyaan shaqooyinka loo igmaday. "Befehl is befehl!"
Waxaan marwalba haysan lahayn yaraanta buluugga ah ee dariiqyada. Labiskaas buluugga ah ayaa tan iyo markii la beddelay lebis militeri oo kale ah oo leh muuqaal aad u dagaal badan, buufin, buufin basbaas, dabeysha dabcan iyo hubka caanka ah. Mudo intee leeg ayay noqonaysaa inta ay tirada faraha badan ee fuliyayaashu sidoo kale helayaan hub? Horaantii Waxaan saadaaliyay in ciidan ahaan la geyn doono isla markaana ay jirto fursad fiican oo tanina waa tan keentay in ciidan Mareykan ah uu soo gaaro Vlissingen usbuucii hore. Waxay u badan tahay inay ka caawin doonaan dhowr dal oo EU ah.
Wax kasta oo aan saadaaliyay ilaa iyo hadda way rumoobay. Markaa mar dambe igama magacaabi kartid qof khiyaanay ama qof fikir shirqool ah. Dib u noqoshadu waa kiiska. Qof kasta oo moodayay inaan ahay masiibo ayaa haatan jooga guriga oo wuxuu la kulmay wixii aan saadaaliyay. Waad aqrin kartaa qodobbada toddobaadyadii la soo dhaafay.
Waxaan awoodey inaan sameeyo saadaashaas sababtoo ah waxaan ku dhex arkaa qoraalka mastarka. Waxaan ku sharaxay qoraalkaas Master-ka buuggayga. Qofkastoo akhrinaya buuggaas waan heystaa ku darista qaar ka mid ah qoran. Waa muhiim inaad fahanto qoraalkaas Master-ka isla markaana aad runtii aqriso buuggaas daboolka ilaa daboolkiisa. Buuggaas, oo aan daabacay dhammaadkii sanadkii hore, waxaan saadaaliyay in ay jiri doonto masiibo kale oo lagu riixo tallaalka qasabka ah ee adduunka oo dhan.
In qodobka Maarso 18 Waxaan sidoo kale sharraxay sida dillaaca coronavirus-ku uu u gaaban yahay nidaamka shuuciga shuuciga ah. Nofeembar 25, 2019, waxaan ku sharaxay sida kaabayasha iyo dimoqraadiyada been abuurka ah ay had iyo jeer u ahaayeen diyaarinta wadajirkaas. Sidoo kale waa muhiim inaad gujiso xiriirintaas oo aad aqriso qodobkaas.
Haddii aad hadda u maleyneyso in arrimuhu si wanaagsan u socdaan oo dimuquraadiyadda ay ku soo noqon doonto dhowr toddobaad oo aad dib u heli doontid xorriyaddaadii oo dhan mar labaad, waxaan jeclaan lahaa inaan idin xasuusiyo inaan sidoo kale dhibaatada cimilada haysanay. Ka dib oo dhan, waa inaan si dhakhso leh uga takhalusnaa qiiqa hawada CO2 si aanan ugu dhiman 12 sano gudahood. Mar haddii loo isticmaalay in aan wadno oo aan duulno dhawr bilood gudahood, waxaa jiri kara warbixin muujineysa sida uguyaraan ee kuwaa ay u ahaayeen heerarka CO2 la cabiray waxaanna leenahay wixii ugu dambeeyay ee aan ku joogno xaaladda degdegga ah .
Qalalaasaha ayaa imanaya Telegraaf-na wuxuu ku dhawaaqay farriinta kor ku xusan ee 18-ka Maarso (oo ku saabsan boliiska oo loo diyaariyay xidhitaan) in dadka laga filayo inay lumiyaan fahamkooda iyo samirkooda mar uun. Markaa waxay diyaar u yihiin inay kuula dhaqmaan gacan adag. 'Gacanta xoogga'.
Waa la saadaalin karaa in dadku argagaxaan, sababta oo ah qof walba ma haysto cunno ku filan oo lacag caddaan ah ayaa la mamnuucayaa. Tani waxay ka dhigan tahay inaad kubixiso pin .
Ma xasuusataa qalalaase dhowaan ka dhacay xafiiska cashuuraha? Taasi waxay ku ciyaartay gudaha July 2019 weli. Marka haday dawladdu si lama filaan ah u qaaddo dhamaan noocyada talaabooyinka cusub oo ay tahay inay dejiso nidaam maamul oo cusub si dadka loo siiyo dakhli aasaasi ah, miyaad filan kartaa in taasi ay si tartiib tartiib ah haatan u socon doonto? Maya, dabcan maya. Dhammaantiis waxay noqotaa mid aad u dhib badan xagga waxqabadka. Dadkuna markay lacag lumiyaan, waxay cunayaan cunto. Waad qiyaasi kartaa waxa dadka gaajaysan sameyn doonaan.
Su'aasha dad badani isweydiin doonaan mustaqbalka dhow waa:Fayraska corona miyuu runtii ahaa mid khatar ah oo intaas oo dhan lagu muteystay?"
Su'aalaha ugu waaweyn ee wajiyada badan wajiyadoodu waa: Maxaan sameyn karaa? Sideen ula tacaali karaa dhammaan tallaabooyinkan adag? Sideen uga jawaabi karaa haddaan diidanahay wax?
Waxaan si buuxda uga jawaabi karaa su'aalahaas oo keliya haddii aad buuggayga akhriday. Hal shay ayaa cad: inaad leedahay xuquuqda aasaasiga ah ee xorriyadda dhameystirka!
Gobolka shuuciga cusub ee teknoolojiyadda, oo hadda kugu faafay iyada oo ku hoos jirta "qufulka coronavirus", wuxuu isku dayi doonaa inuu ka qaado xuquuqdan oo dhan haddii aadan yeelin waxa ay rabto. Tani waxay ka dhigan tahay in lagu xiri doono haddii aadan iskaashi la yeelan. Ka dhigi maayo wax ka qurux badan kan ay hadda tahay. 7 sano ayaan ku qaatay noloshayda si aan ugu digo dadka Nederland waxkastana waan waayey (sababa la xiriira ololaha smear-ka internetka). Waan ogaa in tani ay imaneyso iskuna dayay inaan digo. Laakiin rajo ayaa jirta! Waxaa jira rajo aad u xoog badan!
Qaybta dambe ee maqaalkan, waxaan ku sharixi doonaa rajadaas waxaanan sidoo kale sharaxi doonaa sida saxda ah ee aad sameyn karto. Waxaan ku siin karaa tilmaantaas qof kasta oo mar hore aqriyey buugga, sababta oo ah la'aanta fahamka aasaasiga ah ee asaasiga ah ma aad fahmi karto waxaan qorey. Waa inaad marka hore ogaataa waxa uu yahay qoraalka 'Master' iyo waa inaad marka hore fahamtaa nuxurka waxa socda. Marka hore aqri buugga ka dibna aqri qodobka intiisa kale.
Ogsoonow: Waxay noqon kartaa qormadaydii iigu dambaysay, maxaa yeelay waxaan ka tegey Nederland dhawr sano hadda oo aan ku noolahay waddan ay tirada guud ee xannibaaduhu mar horeba shaqaynayeen oo wakhti kasta la i xidhi karo. Marka hadaadan arkeynin qodobo cusub oo ka muuqda websaydhkan, waad ogtahay inay taasi tahay kiiska.
Si aad u sii wado aqrinta maqaalkan, waxaad xubin ka noqon kartaa adigoo gujinaya badhanka 'taageeradaada'. Tani waxay ku siinaysaa inaad gasho inta ka hartay maqaalkan. Dariiqaani waa muhiim maxaa yeelay waa inaad buugga akhridaa marka hore. Waxaad horay xubin uga ahayd laga bilaabo € 2 / bishii sidaa darteedna igu taageer inaan sii wado u halganka xorriyaddaada.
Isha laga helay ogeysiisyada bidix: parool.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl, nomorefakenews.com, nos.nl
Akhristaha martinvrijland.nl wuxuu u muuqdaa inuu sameeyo ficil aad u weyn geesinimo inta lagu jiro waallida fayraska corona
Tags: Intaa waxaa dheer, macnaheedu waa, buug, la taaban karo, coronavirus, jiran, featured, ik, xirid, Martin, waa in, shiidaa, praktische, talooyin, waddan lacag la'aan ah, wat
DHBoom ayaa qoray:
20 Maarso 2020 at 09: 40
Buug iibsaday! Waxaan ka shaki qabaa oo aan rajaynayaa in dad badani raaci doonaan. Shakhsiyan, durba waxaan ku jiraa difaac adag markii aan aqriyay inaan aad u naxay oo wadamada kale horeyba waa u yaabeen. Meelaha kale ee wararka waxaan kaloo ka aqriyay jawaab celin si loo dhaleeceeyo waxa boqorka uu caawa dhahayo, ficilcelinta sida: “Maxay dadku had iyo jeer u fallaagoobaan marka uu boqorka wax oran doono, haddaba ha kuu daayo” EUH, maya! fikirka adag waa la ogol yahay!
20 Maarso 2020 at 11: 24
Saamaynta “Mister Smith” ayaa waliba ah mid si buuxda waxtar u leh maxaa yeelay dadku aad bay u baqayaan waxayna aamminsan yihiin waxkastoo siyaasada, saxaafada, aqoonyahanada iwm ay dhahaan (oo ay ku jiraan dad horey u soo kiciyay oo horey u dhaleeceeyay dowladda iyo MSM) Dhamaanba waxay dib ugu noqdeen xaaladdoodii hore ee hurdada. Waxay hadda rumeysan yihiin in MSM 100% mar kale iyo habeennimadiiba ay dhaleeceyntooda dowladda u beddeleen caqiido indha la 'isla dowladdaas.
Tan macnaheedu waa inaad sidoo kale garwaaqsato in 99% dadka hareerahaaga ah ay isku deyi doonaan inay la dagaallamaan oo ay ku weeraraan si xagjirnimo ah sida loogu yeero "masuuliyiinta", isla marka ay ogaadaan inaadan rumeyn sheekada iyo difaaca raba inaan aado.
Horey ayaan u soo maray tan markii aan muujiyay waxoogaa yar oo shaki ah oo ku saabsan halista viruska corona. Waxaa si xun ii weeraraa dadka oo ay tahay inaan "xidho" iyo inaan ogaado inaan viruska corona uu qatar yahay iyo inaan ka xishoodo fikradayda.
Waxa kale oo si adag la iigu weeraray khadka tooska ah ee internetka markii aan tilmamay in waxqabadka Wasiir Bruins laga yaabo in ay dareemaan dad aad u sareeya oo ku sugan "Holllywood" iyo in laga yaabo inuu raaco raadadkii "nasiibdarrada" R. Hauer. Markiiba waxaa la igu soo weeraray (laga yaabee IM) in ay tahay in aan dib u qaato ereyadayda iyo in uu garto qofka aan ahay iyo meesha aan ku noolahay una diyaar garoobo booqashada isaga iyo asxaabtiisa. Qaar kale oo badan ayaa sidoo kale "qirtay" ilama ay weerarin oo waxay iigu hanjabeen ficilkeyga markii wasiirkeenii aad ufiicnaa uu idlaaday.
20 Maarso 2020 at 12: 28
Lacagta Helikabtar sida loogu soo jeediyay dalal kala duwan ayaa fure u ah nidaamka lacagta dijitaalka ah. Dadka dakhligooda ku lumiya cudurka 'Corona virus' oo qaddarka lacageed loo yabooho markay doortaan… .., waxay dooran doonaan inay aqbalaan qadarka shuruudaha, sidaa darteed lacag caddaan ah oo dijital ah oo leh barta iyo raadraaca xarumaha.
Michael32 ayaa qoray:
20 Maarso 2020 at 12: 29
Dacaayadaha dambiyada ayaa ku jira:
Jarmalka gudaheeda, ganaaxyada iyo ganaaxyada ka warbixinta soo gudbinta ee aan ku habboonayn nidaamka dhowaan.
20 Maarso 2020 at 18: 16
Tan waxaa daba socota farriin yar oo “ay u badan tahay been abuur” farriin wargeyskii ugu weynaa ee been abuur ah ee Nederlaand, De Telegraaf (nooca internetka). Hal qof (waxaa lagu sheegay magac iyo xishood in ay ahayd qof Muslim ah in sidoo kale la xoojiyo waxyaabaha is-khilaafsan, in muslimiinta qurmay iwm) uu ku qoslay wejiga sarkaal bilays ah oo sida muuqata markiiba lagu xukumay 10 toddobaad oo xabsi ah taas. cambaareeyay.
Tani waa duugista (xaalad) niyad-jabka qaanuunka mustaqbalka ee mustaqbalka kaasoo qufacaya dadweynaha wuxuu u horseedi karaa xabsi (tan waxaa loo soo bandhigi karaa si joogto ah oo sidoo kale lagu dabaqi karaa qufaca hargabka, iwm).
20 Maarso 2020 at 18: 42
Haa, waan aqriyay. Waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inaan diro seenyaalaha: "Kaftan yar ama dabeecad fallaago ah xabsi ayaad gali doontaa. Baro sida ay tahay. Oo haa, dhaleeceynta dadka muslimiinta ah ayaa sidoo kale si wanaagsan u socota mar labaad. Si kastaba ha ahaate, ololka ayaa si dhaqso leh u garaacaya daboolka marka fowdo dhacdo. Waxay rabaan kacdoon waxayna rabaan dagaal sokeeye oo udhaxeeya shacabka iyo qaybta islaamka ee dadka (taas kadib Erdogan wuxuu amri doonaa waxyaabaha).
Berna B ayaa qoray:
20 Maarso 2020 at 20: 56
Hi! . Waad ku mahadsan tahay dhamaan qoraalada aad qortay oo aad nooga dhigto aqoon dheeraad ah Martin. Anigu waxaan ahay xubin cusub waxaanna su'aalo kuu qabaa adiga. Maxaad kula talinaysaa muslimiinta inay ku kacaan xaaladdan? Miyaad u malayn in hub loo isticmaali doono dagaalkan, miyuu noqon doonaa mid jidheed? Miyaad ogtahay ilaa inta aan Nederland ku xirnaan karno. Si kale haddii loo dhigo, xuduudaha Yurub dhexdeeda? Tani waxay sidoo kale dhibaato ku noqon doontaa kuwa leh qoys ka baxsan Yurub iyo sidaa darteed anigu ma ogi muddada aan arki doonin aniga oo aan ku jiro. Tani waxay sidoo kale u badan tahay inay dadka ka xanaajiso waqtiga. Ma u maleynaysaa in xaaladani mar hore dhici karto xagaagan? Mise in ka sii badan 2023? Waddankee ayaa laga tegi doonaa oo aan dadka la tallaalin? Ma u malaynaysaa inaan ka baxsan karno tallaalka? Sidoo kale wax shaqsiyan ah. Waxaad dhahday waxaad kujirtaa wadan qufulan. Miyaadan awoodi karin inaad naftaada horay u aragto ama aadan awoodin inaad uga tagto sababo kale? Wax fikrad ah kama haysto halka ay nabad ku sii ahaan doonto. Jasiirad dad tiro yar mise wax? mise dal jilicsan? mahadsanid 🙂
20 Maarso 2020 at 21: 10
Waad mahadsantahay. Akhri maqaallada labadii todobaad ee la soo dhaafay waxaadna ka heli doontaa jawaabo su'aalahaaga. Waxaan sidoo kale kugula talinayaa akhrinta buugga, maxaa yeelay taasi waa aasaaska; sidoo kale muslimiinta.
Kama tagin sababta oo ah igama haysto awood dhaqaale, laakiin sidoo kale waxaan ogaa inaanay macno lahayn meesha aad aduunka joogtid. Fayraskan taajku waa mid ka tarjumaya qorshaha Lucifer (eeg buugga).
20 Maarso 2020 at 21: 38
Xagee jeclaan lahayd inaad joogto Jasiirad aan deganeyn
Sidoo kale fiiro gaar ah u yeelo daqiiqadda 1; 58 "cirbadaha hargabka '
verdo ayaa qoray:
20 Maarso 2020 at 21: 39
Mahadsanid. Weligaa ma dalbay buuggaaga? Weligay akhrin maayo buugaagta, hadda waa inay noqotaa
20 Maarso 2020 at 12: 50
Intii lagu gudajiray Golaha Wasiirrada, wasiirradu waxay tusaale fiican maanta u yihiin: oo waa ay kala fog yihiin.
Midba midka kale ha fiirsado "
Ku dheji xeerarka ama haddii kale waxyaabo way qaldanaan doonaan ”
20 Maarso 2020 at 13: 27
Xaqiiqdii, waxaan durba ku jirnaa kalitalisnimo maxaa yeelay ma jiraan kuwa dhabta ah
diidmo ayaa jirta. Mar labaad qof walbaa waa aamusanyahay, geesiyaal kuleylka sudhan.
Waxaan ku idhi Martin iyo dhajiyayaasha boggan, waxaad tihiin geesiyaasha dhabta ah. Martin kaliya sii wad in taasi tahay shaqadaada dhulkaan, ee uu bixiyo 'ilaah' ama cid kastoo ay tahayba.
In kasta oo aanan 'Masiixi' ahayn haddana waxaan rabaa in aan tixraaco
Efesos 6:11 Soo koobid ahaan waxaan u halgamaynaa hilibka iyo dhiigga laakiin kuwa madaxda mugdi ku ah.
Xulashada wanaagga iyo xumaanta. Dadku had iyo jeer waxay doortaan waxa saxda ah, in kastoo jidkaasi yahay kan ugu adag.
Masruufka ayaa qoray:
20 Maarso 2020 at 14: 02
"Fadlan la soco: tani waxay noqon kartaa maqaalkeygii ugu dambeeyay."
Hadana, waxaan rajeynayaa inaad ka dheeraato dhibaatooyinka ka dhacey viruska dhabta ah. Dhammaanteen waxaan ku hoos jirnaa daawadayaasha, kulligeen waxaan ku dhex marnaa waqtiyo adag. Ciidankuna ha idinla jiro.
Is ilaali oo mahadsanid.
20 Maarso 2020 at 20: 41
Martin qodobbadaada iyo jawaabihiina wali way ka sii dhex bixi doonaan cabbirradaan. Waxba hadda laga qaban maayo, tan waxaa loo yaqaan horumarka. Fayraska anti-ka ayaa hore loo sameeyay, uguma dhicin hoos udhacyada.
Markii dadku iskuxiraan halxiraalaha waxay noqoneysaa mid si lama filaan ah u weynaata oo kor u kacda wax kasta iyo qof kasta, oo ay ku jiraan ilaahyada dunidan!
Sidan ayaan ula xiriirnay aabihii asalka ahaa ee fikirradeenna waxaanna xiriir la sameyneynaa Ilaaha dhabta ah ee ka baxsan dunidan. Halkan kuma iman karo maxaa yeelay isku-darka halkan waa hooseeyaa. Kaliya waxaan ku tusi karnaa Ilaaha runta ah iftiin dhab ah, jacayl iyo run.
Sidaa daraadeed ayaa dunidan na nebcaan doonaa, laakiin waxaan ku dul soconnaa silica oo biyo kama liqno.
Ogow cidda aad tahay iyo meesha aad ka timid.
Orange ka sarreeya, qorraxdu way ka sarreysaa. Waxaan ka nimid wax intaa ka sii badan, ha u ogolaan naftaada inay hoos u dhigto!
Si taxadar leh u dhegeyso, waa luuqadeena mar walbana wey jiri jirtay!
20 Maarso 2020 at 23: 36
Xannibaadayaasha, xandernieuws waxay dhacdaa illaa inta aan ka hadlayo. Ma dhihi karaa in goobta masiixiga ay ka fiicnaan karto uun beero beenta?
Waxaan dhajiyay faallo togan laakiin lama dhejin doono, malaha cilad farsamo awgeed
Cinwaanka wararka ciidda
Waa inaan kala dooranaa: adduunyo hore, waxaan nahay qaanso.
ama way dhamaatay waxaan dul istaagnaa dhibaatada.
20 Maarso 2020 at 23: 55
Haa, Xander wuxuu noqon doonaa mid cabsi badan
21 Maarso 2020 at 11: 19
Ma qiyaasi karo in wararka xiiran aysan ahayn mucaarid la xakameynayo (laakiin waa khaldami kartaa) sababta oo ah ma qiyaasi karo qof u soo kacaya inuu si adag uga fikiro (tani waa mushkilad weyn 99% dadweynaha taasina waa sidaas si toos ah adduunka) iyo warar madax-bannaan ayaa u kufaya habsan-tirka cillad-xumada guud ee adduunka.
21 Maarso 2020 at 11: 33
Marka la eego kor u qaadista cabsida coronavirus (oo ah xuquuqda siyaasadeed ee Nederland), waxaan kaliya ku soo gabagabeyn karaa in Xander isku dayey inuu u wareego xeradayda marxaladda hore si aan ula qabsado jihada akhristayaasha. Wuxuu hadda muujiyaa wajigiisa dhabta ah.
21 Maarso 2020 at 11: 53
Hagaag, taasi waa inaysan nala yaabin. Inta ugu badan ee ay faafiso waa kuwa aad taqaanid. Waxay u istcimaalaan qoraalada 'illuminati' ee cabsi-gelinta dacaayadda si ay dadka caadiga ah u siiyaan dareen diidmo ah. Way ku jecel yihiin taas qorshahooda. Waxaa cajiib ah in midkoodna uusan jirin, haa, kuwa qabo 'virus' oo faafiya dacaayad runtiina waa dhintaan.
Sida muuqata iyagu ma doonayaan inay ku riixaan ficilkaas ilaa xad. Dadku kuma dhacaan qorshayaashooda xun waxyna ku noolaadaan rajo. Markii la xalliyo, guddiyada runta ee dadka caadiga ahi waxay ku imaan doonaan ganacsigooda oo waxay ku socon doonaan sidii ay uga dhacday Koonfur Afrika. Tani waa suurtagal haddii dadka caamka ahi doonayaan.
« Waxyaabaha layaabka leh ee ku saabsan 'Coronavirus panic' ee Dr. Wolfgang Wodarg?
Markay wadarta guud ee xirida coronavirus iyo waxa ay u egtahay: waraaqaha baaritaanka iyo ciidanka »
Guud ahaan Wadarta: 1.414.301